Ndị Nta Akụkọ Agaala Njem Nleta n'Ọdụ Ụgbọelu Anambra - Igbo News | News in Igbo Language
Oct 14, 2021 - 15:41
Aka na-achị steeti Anambra bụ Gọvanọ Willie Obianọ adụọla ndị nta akụkọ ọdụ ka ha bụrụ ndị na-agbaso usoro kwesiri ekwesi wee na-arụ ọrụ ha, site n'itinye ọzụzụ e nyere ha n'ọrụ, ya na ikwu nke bụ eziokwu, ọkachasị dịka o siri metụta ikwupụta ihe dị icheiche ọchịchị ya mepụtagoro na steeti ahụ.
Gọvanọ Obianọ nyere ndụmọdụ a n'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ steeti Anambra oge ha gara njem nleta ịmara ka ọrụ si aga n'ebe ahụ ọchịchị ya na-arụ ọdụ ụgbọelu mba ụwa Anambra (a maara dịka 'Anambra International Cargo and Passenger Airport'), bụ nke a na-arụ n'Ụmụeri, n'okpuru ọchịchị ime obodo 'Anambra East'.
E wezuga ndị òtù ahụ jikọtara ndị nta akụkọ ('Nigeria Union of Journalists, NUJ', ngalabaa steeti Anambra) ndị ọzọ dị icheiche sonyere na njem nleta ahụ gụnyere Kọmishọna ndị uweojii ahụ e wètara ọhụrụ n'Anambra, bụ CP Echeng Echeng; ndị òtù 'Radio Television, Theatre and Arts Workers Union (RATTAWU)' ngalaba steeti Anambra.
Ọ bụkwazị Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ n'ime steeti Anambra, bụ Maazị Marcel Ifejiofor nà ògbò ya nke na-ahụ maka ewumewu ụlọ, bụ Maazị Mike Okonkwo nabàtàrà ma dugharịa ndị ahụ n'ogige ọdụ ụgbọelu ahụ
Ebe dị icheiche e dugharịrị ndị ahụ n'ọdụ ụgbọelu ahụ gụnyere runway, terminal building, tarmac, fire station, trauma center, foyer, main auditorium, na ọtụtụ ebe ndị ọzọ.
N'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ ahụ n'ebe obibi ya dị n'Amawbia, Gọvanọ Obianọ dụrụ ha ọdụ ka ha bụrụ ndị na-ekwu eziokwu oge niile site na mgbasaozi ha; ọbụladị dịka o kwere nkwà na ọ ga-arụchapụ ọrụ dị icheiche o ji n'aka na steeti ahụ tupu ọ rịtuo n'ọkwa ọchịchị n'ahọ ọzọ. O kwere nkwa na ọ bụkwa n'ụlọ ezumeezu mba ụwa ahụ ọchịchị ya na-arụkwa n'Awka bụ isi obodo steeti ahụ ka a ga-anọ wee mee mmemme inyefè ọkwa ọchịchị n'aka onye nke ga-abata abata n'ahọ ọzọ.
Ọ kpọpụtasịrị ọtụtụ ihe dị icheiche ọchịchị ya mepụtasigoro, ma kwupụtakwa olileanya o nwere na Ọkammụta Chukwuma Soludo ga-enweta mmeri na nhọpụta ahụ a ga-eme n'abalị isii nke ọnwa Nọvemba ahọ a, bido ebe ọ kwọsịrị, ma mekwa nke ọma karịa ya.
N'okwu nke ha n'otu n'otu n'ebe ahụ, Osote Onyeisi òtù NUJ na mpaghara ndịda-ọwụwa anyanwụ ala Nigeria, bụ Maazị Emma Ifesinachi; na onyeisi òtù RATTAWU n'ụlọ mgbasaozi ABS, bụ Oriakụ Maureen-stone Enujioke kelekwazịrị ma jaa Gọvanọ Obianọ ike maka agadaga ọrụ ọdụ ụgbọelu ahụ na ọrụ ndị ọzọ ọ rụgoro na ndị nke ọ ka na-arụ arụ n'ime steeti ahụ, bụkwazị nke megoro ka steeti ahụ bụrụzie ejiamaatụ.
Ụfọdụ ndị nta akụkọ ndị ọzọ kwuru okwu n'ebe ahụ kèlèkwara ma kpọkuzie ya bụ Gọvanọ ka o jisie ike n'ọrụ.
Dayọsiisi Agụata Emeela Nnukwu Ọgbakọ Ndị Nna, Katọọ Nsogbu Na-Adakwàsị Nigeria